I-BIA - Ibhethri lase-Italy le-ADHD. Ukubukeza: amandla nobuthakathaka
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izibuyekezo » Ubuhlakani nemisebenzi yokuqonda » I-BIA - Ibhethri lase-Italy le-ADHD: isibuyekezo
Njengoba igama libonisa, i BIA yibhethri lezivivinyo zokuhlola ukusebenza kwengqondo okuvame ukuntuleka ezinganeni nakubantu abasha abanokusilela kokunaka. Ngokuqondile, kukhona uchungechunge lwezivivinyo zokuhlola izakhi ezahlukahlukene ezihlobene Attenzione e imisebenzi ephezulu. Ngaphezu kwalokhu, amaphepha emibuzo nawo atholakala kumtholampilo ukuze ahlole iphuzu le-subjential yokubuka isifundo esihloliwe, abazali nothisha.
I-8 - SDAI, SDAG ne-SDAB esikalini
9 - Izitebhisi ze-COM
Isikali se-SDAI, SDAG ne-SDAB Ukuziphatha okuyinkinga
Izitebhisi ze-COM Izinkinga ekuhlanganeni kwe-ADHD
La BIA ibhethri elivumela i Ukuhlolwa kwemisebenzi yokuqonda "transversal" ukwazi ukuthonya kakhulu ukusebenza kwesikole kanye nezinye izimo zokuphila kwansuku zonke. Iphinde ivumele ukuhlolwa kokubili ngokusebenza kokusebenza nangamaphepha emibuzo akuvumela ukuqoqa imininingwane kusuka kumaphuzu amaningi wokubuka.
Imisebenzi yokuqapha-ukuphatha, yize eyisisekelo ezimeni eziningi (kufaka phakathi isikole), ngokumangazayo imvamisa ayishiywa ekuhlolweni kwe-neuropsychological. Le sethi yezivivinyo imelela ithuluzi elisebenziseka kalula ekuboneni noma ibuphi ubunzima obuzophenywa ngesikhathi sokuhlolwa.
Amasampula wokumisa wokuhlola ahlukahlukene we BIA ukulala yenombolo encishisiwe. Ibhethri ishiya nezinye izinto ezibaluleke kakhulu eceleni emkhakheni olawula ukunakwa, ukunakwa okuhlukanisiwe ikakhulukazi, ukunakwa okuguqulwayo, ukuhlelwa kwamazwibela nokuhlelwa kwendawo kanye nememori yokusebenza, kokubili kusukela endaweni yokubukwa kwesikhala nokukwazi ukubuyekeza (nayi i-athikili mayelana nokuhlolwa ukuhlola imisebenzi yesikhundla).
Ngomqondo kungasiza ukuqeda ukuhlolwa ngezivivinyo njenge-Memory yamadijithi (i-WISC-IV), ukuxhumana okuhleliwe (i-CAS) noma i-Trail Ukwenza, BVS-Izifundo, lo UMbhoshongo waseLondon nezinye izivivinyo ze I-BVN.
Konke kukho konke BIA kuseyinto eyodwa Ithuluzi elingenakushoda phakathi kwalabo ababandakanyeka ekuhlolweni kwe-neuropsychological esikhathini sokukhula.
I-BIA - Ibhethri lase-Italy le-ADHD: isibuyekezo2015-12-282020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2015/12/bia1.jpg200px200px
Ake sixoxe ngokunakwaI-ADHD, izindatshana, i-Neuropsychology
I-BVS - AMAKHAYA. Ibhethri yokuHlola iMemori yokubonakalayo nephanjiwe: ukubukezaUbuhlakani nemisebenzi yokuqonda, Ukubuyekezwa